Awuqinisekile ngeRed Heeler? Nakhu Okudingeka Ukwazi - Izinhlobo
I-Red Heeler iyi- onomoya onamandla uhlobo olwaziwa ngamandla alo okwalusa. Lawa ma-canine ahlakaniphile abe yizintandokazi phakathi kwabafuyi bezilwane base-Australia amashumi eminyaka.
Kepha imvelo yabo njenge izinja ezisebenzayo akusho ukuthi azikwazi ukuba yizilwane zasekhaya ezinhle. La ma-Heelers athembekile kubanikazi bawo futhi angaba abangane abathanda ubumnandi, abadlalayo.
Yazi uhlobo, futhi ungathola umngane wakho omusha omkhulu!
Umlando we-transcontinental we-Red Heelers
Ngabe iRed Heeler ibukeka kanjani?
Ukuziphatha ongakulindela ku-Red Heeler
Ukunakekela Inja Yezinkomo Zase-Australia
Izingqinamba ezingaba khona zezempilo zezinja ze-Heeler
Ukuqeqeshwa okufanele kwezinja zezinkomo
Imisebenzi ongayithokozela ngeRed Heeler yakho
Ngikulungele ukuthola i-Red Heeler!
Izingxube ezithandwayo zezinja zezinkomo zase-Australia
Ungumngane ophelele wale nja esebenzayo?
I-Red Heeler, njengeBlue Heeler, injalo hhayi uhlobo lwayo .
Empeleni ungukwehluka kwe- Inja Yezinkomo Zase-Australia (ACD) futhi yaziwa nangokuthi yiQueensland Heeler noma iHall Heeler.
I-ACD ibe nomlando othakazelisayo futhi ihambe izinkulungwane zamamayela isuka ezweni layo lase E-Australia eNyakatho Melika.
Ngawo-1800, indoda eqanjwe igama UGeorge Hall wathutha nomndeni wakhe esuka eYurophu waya e-Australia, lapho asungula khona izikhungo zezinkomo eziphumelelayo eNew South Wales.
Ngokushesha, wayeselusa izinkulungwane zemfuyo emizileni yesitoko eya ezimakethe zaseSydney. Inkinga? Wayelahlekelwa izinkomo eziningi kakhulu emahlathini nasezintabeni ezimangelengele.
Indodana kaGeorge uThomas yanquma ukungenisa izinja ezinamandla kusuka eNgilandi ukusiza ngenkinga yokwelusa. Ngeshwa, izinja zikwazile ukuhambisana nezilwane amabanga amafushane.
UThomas uthathe isinqumo sokuwela laba bahlukanisi nabafuywayo dingoes . Umphumela waba inja yezinkomo eqinile eyagcina yamukela igama Inja Yezinkomo Zase-Australia .
Izinja Zenkomo Zase-Australia ziya e-United States
Ekuqaleni kwawo-1940, udokotela wezilwane waseSydney U-Alan McNiven kubangele impikiswano ne- IRoyal Agricultural Society Kennel Club (RASKC) .
I-RASKC yakwenqaba ukubhaliswa kwezinja zikaMcNiven futhi yagcina ixoshe uMcNiven ngokusebenzisa amaphepha okubhaliswa kwezinja ezifile emidlwane yakhe.
Ngalesi sikhathi, noma kunjalo, uMcNiven wayeseqale ukuthekelisa izinja zakhe e-US. Omunye umthengi wayekhona UJack Woolsey , udokotela wezilwane waseCalifornia. UWoolsey waqala ukuzalanisa izinja futhi wabhalisa udoti ku I-National Stock Dog Registry waseButler, e-Indiana.
Izinja Zenkomo Zase-Australia zaqala ukuhlukaniswa ngaphansi kwesigaba 'sokuxubile' yi-AKC, kodwa lawa ma-canine ekugcineni athola ukuqashelwa okuphelele kohlobo ngu 1980 .
I-Queensland Heelers yizinja eziphakathi nendawo, ezine- icwecwe futhi yakhe imisipha . Imisipha emile kahle entanyeni yayo, emahlombe nasemilenzeni ivumela izinja ukuba zihlale izinsuku ezinde emapulazini nasemapulazini.
Sikhule ngokugcwele, lo Heeler uvame ukuma phakathi Amasentimitha angu-17 kuya kwangu-20 (43 kuya ku-50 cm). Isisindo saso esiphakathi siphakathi Amakhilogremu angama-35 kuye kwangama-45 (15 kuya ku-20 kg). Ama-ACD abesifazane ajwayele ukuba lula futhi abe mancane kunabalingani bawo besilisa.
Okwenza iRed Heeler ingubo yayo ehlukile. Izinhlobonhlobo ‘ezibomvu’ zezinkomo zezinja zase-Australia zinamajazi anazo iphethini enamachashaza anezimpawu ezibomvu eziqinile .
Lo mbala wejazi owehlukile ungumphumela wezinwele ezibomvu ezifakwe ngejazi elimhlophe, okuyizinto zonke imidlwane ye-ACD ezalwa nayo.
Esinye isici esivamile salezi zinja zezinkomo ukuba khona kwe- amabala aqinile ombala emizimbeni yabo noma ebusweni. Lezi zinhlamvu zivame ukuba mhlophe futhi zingavela emzimbeni wale Heeler noma njengokumakwa ebusweni bayo.
Ngaphandle kwemaski yazo amhlophe, lezi zinja zingahlukaniswa ngamehlo azo amise okweqanda, imvamisa ngombala omnyama, nangazo isexwayiso .
Bheka le vidiyo ukuthola umbono ongcono ngokubonakala kwamaHall Heeler:
Lezi zinja ziyaziwa ngamazinga azo aphezulu wamandla nangazo ukuzimela , abazithuthukisa ngokwemvelo njengoba babethenjiwe ukuzelusa izinkomo bebodwa.
Ngaphandle komugqa wayo ozimele, i-Australian Cattle Dog nayo idinga ubudlelwano, nayo. Lolu hlobo lwaziwa ngalo ukwethembeka nokuzinikela emndenini wayo. Baziwa njengezilwane ezifuywayo ezinothando ezithanda ukunamathela ohlangothini lomnikazi wazo.
Abazwayo bavame ukuba ne- imvelo yokudlala , futhi, ngakho-ke bazokwenza abangane abahle kakhulu bezingane. Lezi zinja zicishe zingakhathali, ngakho-ke zingakwazi ukuhambisana nezingane zabo bonke ubudala.
Banjalo okuvikela kakhulu yabanikazi babo, bakhe izibopho eziqinile nabantu abachitha isikhathi esiningi nabo. Ungathola i-Heeler yakho 'ikuvikela' ezinsongweni ezingaba khona ngaphandle kwemiyalo evela kuwe.
Futhi ngenkathi benobungane kubantu abajwayelene nabo, lezi zinja zinjalo Kugcinelwe abantu ongabazi . Bajwayele ukuqaphela ezimweni ezintsha kubo, kodwa ukuzihlanganisa nabantu kuzosiza ukuqeda amahloni ngokweqile.
Ngabe le Heeler ikhonkotha kakhulu?
Lezi zinja azenzi msindo omkhulu lapho zisebenza, kodwa ngeke zinqikaze ukukhonkotha ukuze zihehe ukunakwa kwakho. Futhi uzokukhumbula nakanjani okwabo amagxolo ahlukile, aphezulu .
Laba bantu abazwayo bangakhonkotha noma bakwazise ngezinsongo ezingaba khona emvelweni. Lo mkhuba, uhambisana nokuvikelwa kwemvelo kohlobo, kungenza iQueensland Heeler ibe inja enhle kakhulu yokuqapha .
Izingqinamba ezingaba khona zokuziphatha zezinja zase-Australia
AmaHholo Heeler angakuthola kunzima ukuzivumelanisa nezimo lapho evezwa khona yizinja eziningi angajwayelene nazo.
Angazama ukuzibonakalisa njengomholi wamaphakethe, okungaqala ulaka .
Ukuhlangana ngokwanele kungasiza ekwehliseni lokhu kuthambekela enjeni yakho.
Vele, unephutha le- umuzwa onamandla wokuncipha . Le nja ilusa ngokunqamula ezinkomeni ezingafuni ukuhamba.
Ungamthola ejaha umsindo, egijimisa izingane ngemizamo yokuzelusa.
Ukuluma ukuvimbela iza kahle ekunqandeni lokhu kuthambekela ku-Heeler yakho. Kuzosiza futhi ukufundisa izingane zakho ukuthi zingagijimi lapho inja ikhona.
Inja Yenkomo Yase-Australia yaziwa ngayo ubunzima . Kuklanyelwe ukuphatha ukuhamba noma ukugijima amabanga amade ezindaweni ezimbi kanye nokusebenza emazingeni okushisa aphezulu isikhathi eside. Okwabo ukubekezelelana okuphezulu kobuhlungu kuzobagcina besebenza noma belimele.
Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi lezi Heelers azidingi i-TLC. Nakhu okudingeka ukwazi ukunakekela kahle i-Red Heeler.
Ungayilungisa kanjani i-Heeler
Izindaba ezinhle: Izinja Zezinkomo Zase-Australia azilingani ukunakekelwa okuphansi uma kukhulunywa ngokuzilungisa.
Ama-ACD anengubo ebushelelezi, ekabili elele ukunakekelwa kalula. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuze uhlale usesimweni esihle ukuxubha okungenani kanye ngesonto . Ungasebenzisa futhi igilavu ​​yokuzilungisa ukuze wenze inqubo ibe lula.
Izinja zeRed Heeler ziyachitha futhi zishaya amabhantshi abo angaphansi kabili ngonyaka, imvamisa entwasahlobo nasekwindla. Kungase kudingeke ukuthi ukhuphule ukuxubha ku kabili noma kathathu ngesonto ngesikhathi sokuchitha isikhathi ukususa izinwele ezifile ejazini.
Ijazi lezinja lezinkomo alinayo insalela enamafutha futhi ayijwayele ukuthuthukisa iphunga, ngakho-ke akudingeki ukuthi libe njalo wageza kaningi. Ukuthola i-Heeler yakho kubhavu kanye njalo inyanga eyodwa kuya kwezimbili kufanele yanele ukumgcina ehlanzekile.
Vele, kufanele ugeze inja yakho lapho ingcola ngokubonakala ingaphandle usuku lonke. Uma i-ACD yakho ingaphezulu kwesilwane esisendlini, ungayisula phakathi kwamabhati ukuze ihlale ihlanzekile.
Ukuvikela izinkinga zezindlebe, izindlebe zeRed Heeler zidinga ukuhlolwa okungenani kanye ngenyanga . Bheka ukungcola, ukukhipha, izimuncagazi nephunga elibi. Ungasebenzisa ibhola likakotini eliswakanyiswe nge-vet-evunyelwe ukuhlanza noma uwoyela wamaminerali ukusula izindlebe zangaphandle zenja yakho.
Kubalulekile futhi sika izinzipho zenja yakho , njengoba izipikili ezinde zingenza ukuhamba noma ukugijima kungabi mnandi kuye. Lokhu kuzophinde kuvimbele ukulimala okungenzeka, njengezinyawo nezikhuni ezikhubazekile.
Yini yokondla lezi zinja ezisebenzayo
Izinja zezinkomo zase-Australia zidinga ukudla lokho kuzobasiza ukuthi bagcine amazinga abo aphezulu wamandla futhi babhebhezele amandla abo.
Njengezinja ezisebenzayo, abakwaRed Heelers bazodinga ukudla okunamaprotheni aphezulu - funa i-kibble equkethe Amaprotheni angama-30% kuya kuma-35% .
Izinsiza zamaprotheni ekukhuleni kwezicubu nokulungiswa kwezicubu futhi ziqinisa amalunga.
Ukudla okunika inja yakho kufanele futhi kube nokuqukethwe okunamafutha aphezulu - ngaphezu kuka-20% - ukugcina amazinga akhe wamandla ephezulu nokugcina isikhumba sakhe kanye nejazi liphilile.
Izinhlanzi ezinamafutha njenge-salmon ne-tuna zizonikeza inja yakho u-omega-3 no-omega-6 fatty acids anele.
Ama-carbohydrate nawo ayimithombo yamandla emihle kakhulu; vele uqiniseke ukuthi unikeza inja yakho ukudla okunotha kalula okune-carbohydrate njenge ubhatata noma irayisi elinsundu .
Kufanele iRed Heeler idle malini?
Abantu Abazwayo Abadala kufanele bondliwe Izinkomishi ezi-1 kuya kwezingu-2 zokudla kwenja eyomile nsuku zonke. Nciphisa ubungozi bokuqunjelwa ngokuhlukanisa leli nani libe yizidlo ezi-2 bese usebenzisa izitsha zokudla okuhamba kancane.
Kodwa-ke, inani lokudla okudliwayo yinja yakho kufanele futhi lincike ebudaleni bakhe, usayizi, isisindo, kanye nezinga lomsebenzi. Ungahle uthande ukuxhumana nodokotela wezilwane wakho ukuze unikeze inja yakho izingxenye ezifanele.
Izinja Zezinkomo Zase-Australia imvamisa ziwuhlobo oluphilile, ezinesilinganiso sokuphila se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 .
Kodwa-ke, bathambekele ekuthuthukiseni izimo ezithile zofuzo.
Eyodwa inkinga yamehlo iRed Heeler ithambekele ekubeni yiyo ukuqhubeka kwe-atrophy ye-retina , Ukwehla okuqondile kwe-rod-cone noma i-PRCD.
I-PRCD ibangela ukuba izinduku nama-cones e-retina kwehle, okuholela ekungaboni ngokuphelele.
Ngeshwa, alikho ikhambi le-PRCD. Uyokujabulela ukwazi ukuthi ukulimala kwe-retinal akubangeli ubuhlungu ku-Heeler yakho, futhi uzozivumelanisa nobumpumputhe obuqhubekayo ngosizo lwakho.
Njengoba ziwuhlobo olusebenzayo kakhulu, lezi zinja nazo zithinteka kakhulu yi izingqinamba zezempilo zemisipha njenge-elbow dysplasia, i-hip dysplasia , nesifo samathambo.
Ijazi elifushane lalenja yezinkomo nayo ingayenza ithambekele kokuhlukahlukene izinkinga zesikhumba , njenge-allergies. Uma ubona ukuklwebha ngokweqile ngokungajwayelekile enjeni yakho noma uma iRed Heeler yakho ilahlekelwa izinwele, mhlolisise kudokotela wezilwane.
Ukuba isilwane somndeni kukude nezimpande zezinja ezisebenzayo zeQueensland Heeler. Noma kunjalo, ukuqeqeshwa kusenesikhathi izovumela inja yakho ukuba iphumelele endaweni yasekhaya.
Inja Yenkomo Yase-Australia iyinja ehlakaniphile, ephendulayo. Eqinisweni, ibalelwa njenge- 10th bayiziphukuphuku kuzinhlobo eziyi-138. Sebenzisa lobu buhlakani ngokusebenzisa okuhleliwe, okungaguquguquki inqubo yokuziqeqesha . Qinisekisa ukuthi inqubo iyajabulisa futhi iyathakazelisa ukugcina inja yakho ihlanganyela.
Sebenzisa ukuqinisa okuhle ngakho-ke isilwane sakho sihlobanisa silandela imiyalo yakho ngokuzijabulisa noma imivuzo. Ungamnika umuthi njalo lapho elandela imiyalo yakho yokuthi 'hlala', 'hlala', noma 'isithende'.
Lezi Heelers zidinga okuqinile i-alpha ukuwahola, futhi inja yakho ibheka ubuholi kuwe. Qiniseka ngemiyalo yakho, kepha gwema ukumshaya noma ukumthethisa ukuze umjezise. Esikhundleni salokho, lungisa imikhuba engathandeki nge ukuqinisa isimilo esihle ngokudumisa nokuphatha.
Ukuzijabulisa kubalulekile esemncane kakhulu, imvamisa ngesikhathi sokulunyulwa. Izinja zezinkomo zase-Australia kufanele zivezwe ebukhoneni babantu njalo, ikakhulukazi abangabazi, ukuze zingabanaki ezindaweni ezintsha.
Bewazi yini ukuthi Izinja Zenkomo Zase-Australia zibizwa ngama-Heelers ngoba beziqeqeshelwe ukwelusa imfuyo ngu ukunqamuka ezithendeni zabo ? Yingakho lezi zinja zingathola 'umlomo' ngisho nangesikhathi sokudlala.
Imidlwane ye-Heeler eqeqeshwe kahle futhi ehlangana nabantu ingakwazi ukulawula lesi silwane, inqobo nje uma iqeqeshwe kusenesikhathi.
I-Heeler esebenzayo yi-Heeler ejabule! Ukuba yinja esebenzayo, unamazinga aphezulu wamandla.
Awukwazi ukugcina indlela yokuphila yamazambane ngalolu hlobo oluzungezile, njengoba ezodinga okungenani amahora amabili okuzivocavoca umzimba nsuku zonke.
Imisebenzi yakho yansuku zonke kaHeeler ingabandakanya ukulanda, ukuqeqeshwa kokulalela okuthuthukile, kanye ukuqeqeshwa kwe-agility .
Uzophinde enze kahle emidlalweni ye-canine efana ne- schutzhund ne-flyball. Inja yakho izokujabulela nokuhamba noma ukugijima uzungeze ibhulokhi nawe.
Lolu hlobo lufanelwe ikakhulukazi izintaba , ngenxa yokuqina kwabo kanye nokushayela okuphansi kwezilwane. Bazokhetha ukunamathela ohlangothini lwakho, futhi, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi i-Heeler yakho izula endleleni.
Uzokuthanda nokuyobhukuda, futhi, futhi iningi lalezi zinja ababhukudi abahle kakhulu . Uma esewasebenzisile amandla akhe, i-ACD izokujabulela ukugoqa ezinyaweni zakho noma ukuphumula ekhreyithini yayo.
Ukuzivocavoca nemidlalo kuyizindlela ezinhle zokugcina ingqondo yaseQueensland Heeler icijile, nayo. Imidlalo yama-puzzle namathoyizi kuzoqinisekisa ukuthi inja yakho ingabhori uma isendlini.
Amandla aphezulu we-Australian Cattle Dog kufanele aqondiswe njalo ukudlala okulawulwayo noma umsebenzi . Amandla enja yakho angasetshenziswanga azobonakala njengokuziphatha okulimazayo. Angase aqale ukumba kudoti wakho futhi alume ifenisha yakho ukuzijabulisa.
Ucabanga ukuthi usukulungele ukuthatha ikhaya lezinja zase-Australia? Yebo, into yokuqala okufanele uyazi ukuthi umdlwane we-Heeler imvamisa ungabiza noma yikuphi phakathi $ 500 kuya ku- $ 700 .
Imidlwane ye-ACD evela emigqeni ephezulu yokuzala ingabiza nxazonke $ 1,800 kuya ku- $ 5,500 ngamunye.
Abafuyi abanamalayisense abutholakali e-Australia kuphela. Uma use-United States, uzothola abalimi beRed Heeler ezweni lonke, futhi.
Naba abalimi ongabahlola:
I-Saddle Tramp Red Heelers (ETexas)
AbakwaTimber Kennels (IGeorgia)
Ukolusa Imidlwane (E-Alabama)
Unenketho futhi yokutakula laba Bezwi, ngoba iningi labo ligcina ezindaweni zokukhosela ngoba abanikazi babo abalungele izidingo zabo zokuzivocavoca.
Ungaxhumana Ukutakulwa Kwezinja ZaseTexas , I-Carolina ACD Rescue & Rebound , futhi Heeling Heeler Hearts Dog Rescue (E-Arizona) ukubona ukuthi banabo yini abakwaRed Heelers abakhona ukutholwa.
Ngenxa yomdlandla nokuhlakanipha kwabo, lawa ma-canine avame ukusetshenziswa njengezinhlobo zabazali bezinja ezisetshenziselwa ukuzingela noma ukusebenza.
Nazi ezinye ze-Heeler crossbreeds ongazithanda, futhi.
I-Texas Heeler iyisiphambano phakathi kwe-Australian Cattle Dog ne Umalusi wase-Australia . Lezi zinja zinobuhlakani futhi ziyasebenza njengezinhlobo zabazali bazo futhi zisetshenziselwa kakhulu ukwalusa izinkomo, futhi.
Kungenzeka bangalindeki kancane ngenxa yemvelo yabo eyi-hybrid, kepha iningi laseTexas Heelers laziwa ngokuba nobungane.
I-Red Heeler Lab Mix
Ebizwa nangokuthi iLabraheeler, iRed Heeler Lab mix iyinhlanganisela ye- I-Labrador retriever kanye ne-Red Heeler. Banenkani futhi bayasebenza kepha bakhululeke kakhulu kunezinja ze-Heeler ezingacwengeki.
Lezi zinhlobo ezihlwanyelayo zingase zilungele imindeni enezingane ezincane, njengoba ukuxubana kweLab-Heeler kuzoba mellow ngokwengeziwe futhi kungabi namathuba amaningi okujaha izingane ezigijimayo.
I-Labraheeler ( umthombo )
IBorder Heeler, kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi nguHeeler Collie, iyinhlanganisela ye Umngcele Collie noRed Heeler. Lolu hlobo lunamandla amakhulu, luqhamuka kuzo zombili izinhlobo zabazali ezazalelwa izinkomo nomsebenzi wepulazi.
Bahlakaniphile, bathembekile, futhi baqaphile, okwenza babe yizinja ezisebenza kahle kakhulu. IBorder Heelers nayo yinto ejwayelekile emincintiswaneni yezemidlalo ye-canine ngenxa yobugagu bayo bemvelo.
I-Border Heeler ( umthombo )
Inja Yenkomo Yase-Australia idinga umnikazi ozimisele ukufaka isikhathi nomzamo ekunikezeni inja ukuzivocavoca ekudingayo. Ujabule kakhulu ngempilo esebenzayo, ngakho-ke ungumngane we-canine ophelele abathanda ngaphandle nabantu abathanda ukuzivocavoca umzimba.
Lolu hlobo futhi ludinga inqubo eqinile, engaguquguquki yokuziqeqesha kanye nokuxhumana nabantu ngokwanele kusukela esemncane. Ungomunye wezinja ezihlakaniphe kakhulu laphaya, kepha uzodinga ukuholwa okuqinile kwe- an umholi we-alpha .
Cabanga ukuthi usemsebenzini wokuba ngumnikazi weRed Heeler enamandla? Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi!
IGolden Retriever vs Labrador: Umehluko ongu-10 Okufanele Uyazi
izinkomo inja umalusi wase-Australia ukuxuba
izinhlobo ezahlukahlukene zezinkunzi zomgodi ezinezithombe
umngcele collie nokuhlanganiswa komalusi wase-Australia
inja ilokhu ikhohlela futhi izama ukuphonsa
bichon frize nenkosi yamahhashi uCharles spaniel